အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့မောင်းနှင်သူဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး – AutoMyanmar
ကားမောင်းနည်းကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ လက်ဉီးဆရာဘယ်သူလဲဗျ… အဖေ (သို့) သင်တန်းကဆရာလား ?… အဖေဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ်၊ တော်တော်လေးအပွားခံခဲ့ရမှာ 😆) ဒီနေ့ Automyanmar ကတော့ မိတ်ဆွေကို အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့မောင်းနှင်သူဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ မျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဖော်ပြသွားမယ့် Tips လေးတွေဟာ အခုမှစပြီး ကားမောင်းမယ့်သူတွေအတွက်ရော၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူတွေအတွက်ရော အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
၁. ဘရိတ်အတွက် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုအသုံးပြုပါ
ဒီအချက်က လေ့ကျင့်မှုအလုံအလောက်မရှိတဲ့မောင်းသူဆိုရင် ဘရိတ် နဲ့ Accelerator pedal ကိုမှားနှင်းမိနိုင်တာကြောင့် အနည်းငယ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီအချက်က ကားမောင်းသင်နေတဲ့လူတွေ၊ လက်ရှိ မောင်းနှင်သူတွေအနေနဲ့ မကြိုက်နှစ်သက်ကျတဲ့ အချက်တစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေဟာ ဘယ်ဘက်ခြေနဲ့ ဘရိတ်နင်းပြီး ညာခြေနဲ့ Accelerator pedal နင်းမောင်းနည်း ကိုကျင့်သားရသွားပြီဆိုရင်တော့ တကယ်ကိုအကျိုးရှိမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘရိတ်အပိုင်းကို ခြေထောက်တစ်ဖက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသွားစေသလို မတော်တဆယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေနှုန်းကလည်း မရှိသလောက်နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂. အရှိန်နှုန်းကိုတခြားကားတွေနဲ့ တူညီတဲ့အနေအထားမှာထားပါ
ဒီနည်းကတော့ Driver Course တွေမှာသင်ထားပြီးသားအချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက မေ့နေ (သို့) မေ့ထားတတ်ကျတဲ့အချက်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မောင်းတဲ့ သက်တမ်းရင့်လာတာနဲ့အမျှ မိမိရဲ့ကားသူများတွေထက်အရှေ့ရောက်အောင် အရှိန်နှုန်းထားကို ဂရုမစိုက်ပဲမောင်းလာကြပါတယ်။ အဲ့လိုအရှိန်နှုန်းထားကို ဂရုမစိုက်ပဲမောင်းလာတာကြောင့် ရှေ့ကား/ နောက်ကားတွေနဲ့ ငြိပြီး ယာဉ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ယာဉ်အရှိန်နှုန်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ကယာဉ်တွေထက် မနည်း/မများ ထားမောင်းနှင်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းကင်းမောင်းနှင်တဲ့ကျွမ်းကျင် Driver တစ်ဉီးဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃. Steering Wheel အတွက် လက်အနေအထား
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်များများက ကားမောင်းတဲ့အခါ Steering Wheel အနေအထားကို နာရီလက်တံ ၁၀/၂ အဖြစ် Formal သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကတော့ နာရီလက်တံ ၉/၃ (သို့) ၈/၄ ကို Formal အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံးကြီးလက်နှစ်ဖက်ကို Steering Wheel မှာထားနေရတာဟာ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ အဲ့တော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ လက်တစ်ဖက်တည်း Steering Wheel ကိုကိုင်တွယ်ရတဲ့နည်းတွေကို Formal အဖြစ်အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (အထာကျပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိလှတဲ့ နည်းဖြစ်တာကြောင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့မောင်းနှင်သူတစ်ဉီးဖြစ်လိုသူတွေအသုံးပြုသင့်ပါတယ်နော် 😆)
၄. အနီးအနားကရှိနေတဲ့ ကားကို အမြဲသတိထားနေပါ
အထူးသဖြင့် မီးပွိုင့်ကြပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့အနီးစပ်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ယာဉ် (အထူးသဖြင့်ရှေ့မြင်ကွင်းကယာဉ်) တွေရဲ့နောက်ဘရိတ်မီးအခြေအနေကို သတိပြုပြီးစောင့်ကြည့်နေသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရင် မိတ်ဆွေဟာ မိမိရဲ့ယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ အချိန်ကာလပိုရသွားမှာဖြစ်ပြီး တခြားကားတွေနဲ့ ထိမိ/တိုက်မိ အစရှိတဲ့ အက်ဆီဒင့်တွေကို အလိုလိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
၅. ကားမှန်တွေအားလုံးကို သေချာထိန်းညှိပါ
မောင်းသူအားလုံးရဲ့တာဝန်က အန္တရာယ်ကင်းကင်း မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ပါ။ မောင်းသူတစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကားမှန်တွေအားလုံးကို သေချာမချိန်ထားရင်တော့ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါတော့ဘူး။ အဲ့တော့ ကားမှန်တွေကို ဘယ်လိုသေချာချိန်မလဲ ? ကားမှန်တွေကို သေချာချိန်ဖို့အတွက် မှန်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို ဉီးဆုံးပြောပါရစေ။
ကားတစ်စီးမှာဆိုရင် Front Mirror, Driver-side Mirror, Passenger-side Mirror, Cabin’s rearview Mirror ဆိုပြီး မှန် အမျိုးအစား ၄ ခုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Front Mirror ကတော့ အရှေ့ကမြင်ကွင်းကိုကြည့်ဖို့အသုံးပြုရမှာပါ၊ Driver-side Mirror ကတော့ မောင်းသူရဲ့ဘေးနားမှာ ရှိနေပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်က မြင်ကွင်းကိုကြည့်ဖို့အသုံးပြုရမှာပါ။ မိမိရဲ့ကားကိုပြန်မြင်မနေရတဲ့ အနေအထားမှာ ထားမှသာ ဘေးအနောက်ကားတွေရဲ့မြင်ကွင်းကို မြင်သာအောင်ကြည့်ရှု့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Passenger-side mirror ကိုတော့ Driver-side mirror လိုမျိုးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် ဘက်မှာရှိပါတယ်။ Cabin’s rear view mirror ကတော့ ကားရဲ့အနောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကို ကြည့်ဖို့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ကားရဲ့အနောက်အလည်တည့်တည့်ရောက်အောင် မျက်နှာမူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကားမှန်အနေအထားကို ချိန်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ရင် အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့မောင်းနှင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း ၅ ခုကတော့ မိတ်ဆွေကို အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ မောင်းနှင်သူတစ်ဉီးဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ထပ်မံဖြည့်သွင်းချင်တဲ့အချက်တွေ (သို့) ပြုပြင်လိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့ အောက်က ကွန်းမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နော်။